နိုင်ငံရေး Archives - Factcrescendo Myanmar
January 8, 2021 January 8, 2021 Lynn YuLeaveaComment on Fact Check: ဝက်လက်ရွေးကော်က ၂၀၂၀မဲလက်မှတ်တွေကို ၂၀၁၅မဲလက်မှတ်တွေနဲရောပြီး ဖျတ်ဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအမှား
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ မဲစာရင်းနဲ့ မဲစာရွက်အထောက်အထားတွေ မီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့ ပို့စ်တွေ လူမှုကွန်ယက်မှာ မျှဝေမှုအားကောင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ယင်းတို့အထဲမှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဝက်လက်မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက ၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲက မဲလက်မှတ်တွေနဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့နေရာအခတ်ခဲရှိတာကြောင့် ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့က မီးရှို့ဖျတ်ဆီးရာမှာ ၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲက မဲလက်မှတ်တွေနဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို ရောပြီး ဖျက်ဆီးလိုက်တယ် ဆိုတဲ့ ပို့စ်ဟာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ပြန့်နှံ့မှုအားကောင်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာ”***ရွှေမြင်သာအမှိုက်ကျင်း ကတောက်ခေါက်သံ***စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရွှေဘိုခရိုင် **ဝက်လက်မြို့** 6-1-2021 နေလည် ဆယ့်တစ်နာရီ ကျော်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ ၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲ မဲလက်မှတ်များ မီးရှော့ဖျတ်စီးရာတွင် မဲလက်မှတ်များထည့်ထားသော ပီနံအိပ် ၃၂၇ အိပ်ထဲမှ ၂၀၂၀ ရေးထိုးထားသော ချိတ်ပိတ်ထားသည့် ပီနံအိပ် ၂၈ အိပ်ပါဝင်နေပါသည်။ အသည်းကြားကမဲတစ်ပြားပေါင်းများ စွာထည့်ထားတဲ့ ဒီအိတ်ကြီးတွေက သူဟာသူ […]
January 1, 2021 January 1, 2021 Lynn YuLeaveaComment on Fact Check: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မဲသမာမှုလုပ်တာကို နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေက ဖော်ပြသလား- မဟုတ်ပါ
၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မဲမသမာမှုလုပ်ရပ်တွေကို နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေက ဖော်ပြနေပြီဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ရေးသားမျှဝေနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာ “၂၆ . ၁၂ . ၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၈ နာရီ ယနေ့ည နိုင်ငံတကာသတင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲ မဲ မသမာမှု သတင်း # # # # # ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မဲခိုးမှုသတင်းဟာ ယနေ့ညမှာ မြန်မာမှ ကမ္ဘာသို့ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိကြောင်းပါတဲ့…”လို့ ရေးသားထားပြီး မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့တာကို Screenshotရိုက်ကာ ပို့စ်တင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မူရင်းပို့စ်ကို အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ဒီပို့စ်ပါအကြောင်းအရာကိုပဲ ဒီနေရာ ဒီနေရာနဲ့ ဒီနေရာမှာ ပြန်လည်ကူးယူမျှဝေနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ မူရင်းလင်ခ့် – Fb link | Archive link အချက်အလက်စိစစ်ချက် ဒီပို့စ်မှာပါတဲ့ […]
Fact Check: NLDပါတီက ကိုယ်ပိုင်ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ ထွက်ပြေးဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအမှား
December 24, 2020 December 24, 2020 Lynn YuLeaveaComment on Fact Check: NLDပါတီက ကိုယ်ပိုင်ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ ထွက်ပြေးဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအမှား
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLDပါတီဝင်တွေက ကိုယ်ပိုင်ရဟက်ယာဉ်နဲ့ ထွက်ပြေးဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုပြီး RFM (Radio Free Myanmar)အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ ရေးသားထားတဲ့ပို့စ်ကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ပြန်လည်မျှဝေနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာ RFM (Radio Free Myanmar)ဆိုတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ “NLDတွေ ထွက်ပြေးဖို့ အပြင်းအထန်ပြင်”လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပြီး “ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲလိမ်မဲခိုးပြီး ၂၀၁၅ ကထက်အင် အနိုင်ရတယ်လို့ မဖြစနိုင်တဲ့စရင်းဇယားတွေနဲ့ အာဏာကို အဓမ္မတည်းဖြင့်ရယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ NLDတွေဟာ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာ ငွေတွေကို ထင်တိုင်းသုံးပြီး ကိုယ်ပိုင်ရဟတ်ယာဉ်များနှင့် ထွက်ပြေးအပြင်းအထန်ပြင်ဆငင်နေကြောင်း လူမှု့ကွန်ယက်တွင်ပြောဆိုနေကြသည်။ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်သော Leonard အမျိုးအစားရဟတ်ယာဉ်နောက်ထပ် ၂စီးကို ဒီဇင်ဘာ (၁၇)ညသန်ကျော်မှ ကားများဖြင့် ခိုးယူးသယ်ဆောင်လာသည်ကို‌တွေ့ရသည်။”လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ ဒီပို့စ်ကို အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်ကိုပဲ ဒီနေရာ၊ ဒီနေရာနဲ့ ဒီနေရာတွေမှာ ပြန်လည်မျှဝေနေတာတွေ့ရပါတယ်။ မူရင်းလင့်ခ် – […]
December 23, 2020 December 23, 2020 Lynn YuLeaveaComment on Fact Check: NLDက တပ်မတော်ကို ICJမှာ တိုင်ကြားထားပြီး UNတပ်တွေနဲ့ တပ်မတော်ကို တိုက်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအမှား
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLDပါတီက ပြည်တွင်းရေးပြဿနာတွေကို ကမ္ဘာကသိအောင် လုပ်ဆောင်ကာ တပ်မတော်ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးကို တိုင်တန်းထားပြီး ကုလသမဂ္ဂတပ်တွေနဲ့ တပ်မတော်ကိုတိုက်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်အပါဝင် အချက်အလက်မခိုင်မာတဲ့အချက်အမြောက်အများကို အခြေပြုပြီး တပ်မတော်ထေက်ခံသူအချင်ချင်းကြား လှုံဆော်ဟန်နဲ့ရေးသားထားတဲ့ပို့စ်တစ်ခုဟာ လူမှုကွန်ယက် အသုံးပြုသူတွေကြား ပျံ့နှံ့လျက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာ “မိုက်ရိုင်းလိုက်တဲ့ NLD”လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပြီး “ခုပဲ သိရလို့ သိသိခြင်း မျှဝေလိုက်ရပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် အချိန်ဆွဲနေမှန်း ခုမှသိတော့တယ် …၁။ မဲလိမ်လည်မှု မပေါ်ပေါက်ရအောင် လူသုံးယောက်ကို အစဖျောက်ထား လိုက်တယ် -၂။ နိုင်ငံတော်ပိုင်ငွေကြေး ဘီလျံရာကျော်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ထားတာ မပေါ်ပေါက်အောင် ကိုဗစ်နဲ့ ဖုံးကွယ်နေတယ် -၃။ နိုင်ငံတော်အာဏာကို အတင်းအဓမ္မရယူရန် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ကြိုးစားနေတယ် ၄။ ပြည်တွင်းရေးပြသနာကို ကမ္ဘာသိအောင်ချပြပြီး သူ့ကိုမြန်မာ့တပ်မတော်က နည်းမျိုးစုံဖြင့် တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးသို့ […]
December 14, 2020 December 14, 2020 Lynn YuLeaveaComment on Fact Check: တပ်မတော်ရဲ့စစ်လက်နက်ဝယ်ယူတဲ့ဘတ်ဂျက်ကို စစ်ဆေးခွင်ရှိရင် UECက မဲစာရွက်စာတမ်းတွေပြမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအမှား
တပ်မတော်ရဲ့ စစ်လက်နက်ဝယ်ယူတဲ့ ဘတ်ဂျက်ငွေစာရင်းကို စစ်ဆေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကိုချပြမယ်ဆိုပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ဥက္ကဌဦးလှသိန်းက ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးရေးသားထားတဲ့ပို့စ်ကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူတွေကြား မျှဝေနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုရေးသားမျှဝေနေကြတဲ့ပို့စ်မှာ “ကဲမှတ်ကရော UEC က စစ်လက်နက်ဝယ်ယူထားတဲ့ ဘတ်ဂျက်ငွေစာရင်းကို စစ်ဆေးခွင့်ရရင် ရွေးကောက်ပွဲစာရွက်စာတန်းများကို ချပြပါမယ်တဲ့ဗျာ ကဲရှင်းရော့ Crd #”လို့ရေးသားပြီး UEC ဥက္ကဌဦးလှသိန်းပုံနဲ့ ရေးသားမျှဝေနေကြတာပါ။အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်ကို ဒီနေရာ ဒီနေရာနဲ့ ဒီနေရာတွေမှာ ပြန်လည်မျှဝေနေတာတွေ့ရပါတယ်။ မူရင်းလင်ခ့် – Fb link | Archive link အချက်အလက်စိစစ်ချက် တပ်မတော်ရဲ့ စစ်လက်နက်ဝယ်ယူတဲ့ ဘတ်ဂျက်ငွေစာရင်းကို စစ်ဆေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကိုချမယ်ဆိုပြီး ဒီလိုမျိုးရေးသားမျှဝေနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒါဟာသတင်းအမှား ဖြစ်ကြောင်းကို UECက ဒီဇင်ဘာ ၁၁ရက်နေ့က UECရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှာထုတ်ပြန်ကြေငြာထားတာ တွေ့ရပါတယ်။အောက်ပါလင့်ခ်မှာ […]
December 11, 2020 December 11, 2020 Lynn YuLeaveaComment on Fact Check: နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံက တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကို ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တွေ့ခွင့်တောင်းတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအမှား
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကို အပူတပြင်းတွေ့ခွင့် တောင်းဆိုတယ်၊ ဒီလိုတောင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာ တပ်မတော်ဘက်က အတွေ့မခံဘူးဆိုတဲ့သတင်းကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာရေးသားမျှဝေနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာ “နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံက အဘကို အပူတပြင်းတွေ့ခွင့် တောင်းဆို၊ စစ်တရားရုံးဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်း သတင်းက ဥပဒေမဲ့ အစိုးရနဲ့ UECအတွက် ပြေးလမ်းမရှိပါ”နဲ့ “အတိုင်ပင်ခံက အဘဆီအခစားဝင်ချင်သတဲ့ အဘနာယက အတွေ့မခံ…အဘချုပ်ကတော့ အဖြေမပေးဟုသိရ”လို့ရေးသားထားတဲ့ screenshotရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေကို ပြန်လည်ပို့စ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အောက်ပါလင့်ခ်မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ မူရင်းလင်ခ့် – Fb link | Archive link အချက်အလက်စိစစ်ချက် ဒီလိုပို့စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့နဲ့နီးစပ်တဲ့ NLDပါတီရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာမျိညွန့်ကို Fact Cfescendo Myanmarက ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာတော့ “ဒါက အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက ကိစ္စပေါ့နော်၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကြားသလောက်ကတော့ အစိုးရမှာ ဒီလိုမျိုးရုတ်တရတ်တွေ့ရလောက်တဲ့ အရေးကြီးကိစ္စမရှိဘူး၊ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တာဆို ပိုပြီးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ရုပ်တိမရှိတဲ့ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ သတင်းပါ၊ […]
December 9, 2020 December 9, 2020 Lynn YuLeaveaComment on Fact Check: UECက NLDအတွက် မဲ ၃သန်းကျော်ခိုးကြောင်း Defend Europeအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအမှား
Defend Europeအဖွဲ့က NLDပါတီရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို သံသယရှိတာကြောင့် မဲစားရင်းတွေကို လေ့လာရာ ၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမှန်တကယ်မဲပေးခွင့်ရှိသူမှာ (၃၅.၉၄)သန်းကျော်သာရှိပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် UECက ထုတ်ပြန်တဲ့ မဲပေးခွင့်ရှိသူ ၃၈သန်းကျော်ရှိတယ်ဆိုတာက UECက NLDအတွက် မဲ ၃သန်းကျော်လောက် ခိုးပေးခဲ့ကြောင်းကို RFM (Radio Free Myanmar)ကို အတည်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ပို့စ်ကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ပြန်လည်ကူးယူတာတွေ ပြန်လည်မျှဝေနေတာတွေ ပြုလုပ်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ပို့စ်မှာ “မဲများပက်ပက်စက်စက်ခိုးခဲ့သည့် NLD”လို့ အညွှန်းတပ်ထားပြီး အောက်မှာတော့ “ RFM : Maryland,4– 12 – 2020၊၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် တရားဝင်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူသည် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီးအတွက် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ(၃၅.၉၄) သန်းကျော်သာရှိသော်လည်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က […]